Kuongorora kweBitcoin. Zvinotaurwa nevatsoropodzi nezve cryptocurrency | Linux Vakapindwa muropa
Kana paive nechinhu chaishayikwa kubva kuBitcoin kuti chive chinhu chekuvengwa, aive George Soros, anonyanya kufarira wevapanduki, achifunga kuisa mari muiyo cryptocurrency. Panguva yekunyora izvi, Kurume 10, Bitcoin yakanyoresa kukwira kwekuwedzera kwe12% pakati pezuro nanhasi, yakasvika pamutengo we $ 57.000, ichisvika pamadhora mazana mashanu nemazana mashanu ezviuru muna Kukadzi 58.000..
Chikamu chekusimuka kwaive nechekuita neNew York Dhijitari Boka (NYDIG) kupedzisa madhora mazana maviri emamirioni ekukura. Iwo masere masystem ekudyidzana anozoisa mari mukupa kwehunyanzvi kugadzirisa uye kudyara kweBitcoin anosanganisira makambani senge emari emarudzi akawanda Morgan Stanley uye Soros Fund Management, pamwe neRock Ridge, Holdins Group, uye MassMutual, pakati pevamwe.
1 Kuongorora kweBitcoin
2 Haikodzeri nyika chaiyo
3 Haasi ese anopenya ari egirini
Asi, hakusi kubudirira kweBitcoin kana kuvapo kweSoros uye mamwe mareferenzi eCapitalism zvikonzero chete zvinokwezva kushoropodzwa kweBitcoin. Vanamazvikokota vanewo zvekutaura.
Sezvo mutengo wayo unokwira, kushandiswa kwesimba kunowedzerawo. Inofungidzirwa kuti kucherwa kweBitcoin kwakadya t 129.1 TWH, 0,1 kudarika Argentina yese kupfuura muna 2019. Yayo kabhoni tsoka, panguva iyi, yaive yakafanana neyaNew Zealand. Imwe neimwe yeBitcoin transaction inoshandisa zvinosvika mazana mazana manomwe ezviuru zvemakadhi ebhangi.
Simba rekushandisa rinowanikwa mukugadzirwa kweBitcoin.
Chizvarwa cheiyo cryptocurrency inoenderana nechiratidzo chebasa (POW) algorithm. Kune yangu bitcoins, mucheri anodiwa kuti awane mhinduro kuchinetso checryptographic. uye kuti chisarudzo chinosimbiswa nenetiweki.
Nguva imwe neimwe iyo kugona kugadzirisa matambudziko kunowedzera kushanda, network inoshanduka otomatiki, ichiwedzera kuoma kwematambudziko ekugadzirisa. Simba rinoshandiswa rakaenzana nemutengo kukosha kweBitcoin. Kana mutengo ukawedzera, vacheri vatsva vanowedzerwa uye simba remakomputa rinowedzera. Pakarepo zvakare kunowedzera kuoma kwematambudziko. Simba rekushandisa skyrocket.
Haikodzeri nyika chaiyo
Kumwe kutsoropodza kwakaitwa neBitcoin ndechekuti iyo dMushure memakore gumi iine chete marginal utility mune chaiko nyika.
Sekureva kwevamwe vanokanganisa, Bitcoin inoshandiswa chete yekufungidzira uye izvi imhaka yekuti inotambura nematanho akati wandei ehunyanzvi ayo anodzivirira kushandiswa kwayo semari yakajairwa.
Pakati pezvikanganiso izvi
Yakaomeswa muganho wekutengeserana kwe7 pasekondi, kune wese munhu.
Zvese zviitiko ndezveruzhinji.
Mutengo wemari iyi wakanyanya kugadzikana zvekuti chero munhu angautore semari isiri yekufungidzira.
Haasi ese anopenya ari egirini
Vamwe vepaBitcoin miners vanopindura kushoropodzwa kubva kune vezvemamiriro ekunze vachiti izvo Ivo vanongoshanda chete neine simba rinowedzerwazve, asi zvinoita kunge zvisina kukwana.
Kunyangwe ivo vari mashoma kabhoni zvakanyanya kupfuura mamwe magetsi, lSimba rinowedzerwazve rinoramba riine zvarinogadzira. Ivo vanodya huwandu hwakawanda hwezvinhu (kongiri, simbi) iyo kuburitsa kuri iko pachako kuri kusvibisa.
Uye, mune chero mamiriro ezvinhu, kupihwa kwesimba rinowedzerwazve hakugare zvakakwana kuti tirege kuzorora nguva nenguva kune echinyakare sosi yekuwanikwa.
Zviro zvinokona kunge zvakashata. Kune avo vari mumambure avo vari kuronga kuti vagadzire komputa kurwisa kudzikisira kuvimba kwevatengesi. Uye ivo havazviite pane iyo Yakadzika Webhu, kana zvisiri pamapuratifomu akasimbiswa. Ivo uko kwavanoongorora vakasununguka vakasarudzika mapurezidhendi vachibvumira vadzvanyiriri kuti vataure ivo pachavo.
Nezvikonzero zviri pachena, ini handisi kuzoisa zvinongedzo, asi zviripo kune vapepeti veLinux Vakapindwa muropa kana vachida kuongorora chokwadi chechinyorwa chino.
Iyo blockchain tekinoroji uko mashandisiro akachengetwa hazvigoneke kurwisa. Ndokusaka zviito zvaizotarisa kune ayo epakati uye anotambura maficha, kana kuzadza netiweki nekutengesa kwekunyepedzera kuyerera
Imwe mukana ndeye kunongedza madziva emigodhi kana online wallet services.
Zvinoenderana nepfungwa yechirongwa cheAnti Bitcoin
Bitcoin network inongobata 400.000 transaction pazuva uye yakaenzana zvinoenderana. Izvo zvinokwanisika kuburitsa pakati pegumi uye zana zvakapetwa zvakapetwa zvemanyepo, zvakagadziriswa mushe asi uchiuya kubva muzvikwama zvisina chinhu, kana kuunza yakawanda mari yeiyo imwechete bitcoin, kana kumashure nekudzoka pakati pezvikwama zvine mari, asi pasina kubhadhara mari. Aya mashandisirwo haazombo goneswa netiweki, asi anogona kuikurira zvakapusa uye kuapa isingashande
Kubva ipapo kana ini kana maLinux Vakapindwa muropa vanosimbisa iyi mhando yekurwisas. Asi, hazvigoneke kuzivisa vashandisi veBitcoins nezve njodzi dzinogona kuitika pasina kuvatsanangura.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Kuongorora kweBitcoin. Zvinotaurwa neCryptocurrency Vatsoropodzi